Yiziphi Izinjini Zokucinga Ezifundwe ... | Martech Zone
Amakhasi ezinjini zezinjini zokusesha ezinama-algorithms anzima anesisindo setani lokuhlukahluka okuhlukile, kwangaphakathi nangaphandle kwekhasi lakho. Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukubona ukuthi yiziphi izinto ezibalulekile ezinakwa yi-Search Injini, noma kunjalo. Iningi lazo yizinto ozilawula ngokugcwele lapho uhlela noma udizayina isiza sakho noma umane ubhale ikhasi lakho. Lokhu akunandaba noma ngabe iwebhusayithi evamile yencwajana yokumaketha, ibhulogi, noma enye indawo.
Izinto Ezingukhiye Zokusebenzisa I-Search Engine
Ngaphambi kwabafana be-SEO abafunda ibhulogi yami bangidabula - ngizolahla isimangalo laphaya… le yingxenye kuphela yalokho isazi se-SEO esingakunaka lapho sibukeza futhi senza isayithi lakho. Kukhona, kunjalo, ezinye izinto ezinjengamathegi we-meta, Ukubekwa kwe-HTML, nendawo ukuthandwa. Iphuzu lami ukwenza nje umakhi wewebhusayithi omaphakathi noma umnikazi webhizinisi azi ngezinto ezithile ezibalulekile ezingashintshwa kalula.
The isihloko samakhasi akho kuzoba nomthelela ekutheni ikhasi likhonjwe kanjani. Qiniseka ukuthi usebenzisa amagama asemqoka kusihloko sekhasi lakho bese ubeka ibhulogi yakho noma isihloko sesayithi.
Your igama lesizinda kunomthelela ekubekweni kwakho. Uma ufuna ukubekwa okuphezulu kwamagama angukhiye athile noma amabinzana, cabanga ngokuwafaka egameni lakho lesizinda.
Thumela ama-slugs zibalulekile futhi zingasetshenziswa ukusebenzisa amagama angukhiye nemishwana. Ngizama ukusebenzisa isihloko esiphoqayo esiheha umfundi kepha ama-slugs wami wokuthumela avame ukuguqulwa izinjini zokusesha.
The isihloko esikhulu (h1) yekhasi lakho linesisindo esikhulu ngaphakathi kokuqukethwe izinjini zokucinga ezikukhombayo. Ukubekwa kokuphakama (est) ngokomzimba ku-HTML nakho kuzothinta inkomba.
Njengesihloko esikhulu, a isihlokwana (h2) kuzophinde kube nomthelela ekukhonjisweni kwekhasi.
The isihloko seposi lakho, noma izihlokwana ezingeziwe zizothinta ukuthi yimaphi amagama angukhiye nemishwana ekhonjisiwe nokuthi isebenza kahle kangakanani.
Iyaphinda amagama angukhiye nemishwana eyisihluthulelo ngaphakathi kokuqukethwe kubalulekile. Lawa magama angukhiye nemishwana eyisihluthulelo kufanele ihlaziywe ukubona ukuthi ingabe angamagama angukhiye nemishwana eyisihluthulelo okungenzeka iseshwe.
Amagama angukhiye wokuncoma nemishwana eyisihluthulelo izosiza.
Imininingwane engeziwe izihlokwana (h3) iyasiza futhi ingalinganisa ngaphezu kwamanye amagama ngaphakathi kokuqukethwe kwekhasi.
Kusetshenziswa imishwana namagama asemqoka ngaphakathi kwe- ithegi yehange (isixhumanisi), futhi kuyindlela enhle yokushayela igama elingukhiye nenkomba yomugqa wokhiye ekhasini. Musa ukuchitha le mpahla ebalulekile "chofoza lapha" noma "isixhumanisi"… kunalokho, sebenzisa isihloko nombhalo ukuqhuba ngempela ubudlelwano phakathi kwesixhumanisi nemisho esemqoka. Isibonelo, uma ngifuna isizinda sami sihlobene nokumaketha nobuchwepheshe, ngingaqiniseka ukuthi ngisebenzisa:
Njengoba kunjalo ngesixhumanisi sehange, ukufaka amathegi esihloko kuzixhumanisi zesithombe kuyasiza futhi. Njengoba izinjini zokusesha zingeke zikwazi ukukhomba okuqukethwe yisithombe (okwamanje), ukwengeza isihloko esinegama elingukhiye kuzosiza kakhulu - ikakhulukazi uma othile esebenzisa nje Usesho Lwezithombe lwe-Google.
Amagama wesithombe zibalulekile. Qiniseka ukuthi usebenzisa amadeshi hhayi ukugcizelela phakathi kwamagama asesithombeni. Futhi qiniseka ukuthi igama lesithombe lifana nesithombe… ukuzama ukufaka amagama angukhiye esithombeni esingahambisani nakho kungalimaza ngaphezu kokusiza.
Tags: ithegi yehangeumbhalo we-anchor tagumbhalo we-anchorigama lesizindaumaki we-h1umaki we-h2umaki we-h3izihlokoisithombeigama lesithombeamabinzana asemqokaUkusetshenziswa kwegama elingukhiyeAmagama angukhiyeisihloko sekhasithumela ama-slugsisihloko seposiizihlokwanaisihloko sekhasi
Feb 4, 2008 ngo-2: 01 AM
Ngaphandle kokuthi uma ukhombe amabinzana angukhiye angalungile ukuqala ngawo, akunandaba, ngicabanga ukuthi uthole okuningi kwawo.
Umsebenzi ophelele kakhulu.
Feb 4, 2008 ngo-11: 08 AM
UNabhedi! Amagama angukhiye engiwakhethile ayenzelwe ukubukwa, i-SEO!
Feb 4, 2008 ngo-10: 09 AM
Ukwazi i-SEO nokuyichaza ngokwemibandela ye-layman yizilwane ezimbili ezihlukile. Zama ngangokunokwenzeka, ngithola ukubukeka okumangele lapho ngizama ngakho konke okusemandleni ami ukuchaza ukuthi izinjini zokusesha zibukeka kanjani, ukuthi ukuxhumanisa kubaluleke kangakanani nokuthi kungani izihloko zamakhasi zibalulekile. Kungumsebenzi wami ukuveza leyo mibono ngendlela emfushane, eqondakala kalula. Lokhu okuthunyelwe kungisiza kakhulu. Umsebenzi omuhle.
Feb 4, 2008 ngo-11: 09 AM
Ngiyabonga, Dan! Kube amandla kimi futhi ngiyaqhubeka nokuzama ukuyihlela kahle. Ngicabanga ukuthi ngingcono mathupha, ikakhulukazi ngoba ngiyakwazi ukuhumusha ukubukeka okuxakile kwabantu engikhuluma nabo.